Architekt → Architektarka muuqaalka dhulka • naqshadeeyaha gudaha • Immisa ayuu helayaa naqshada naqshadeeye?
Architektarka wuxuu ku shaqeeyaa qorshaynta iyo qaabeynta dhisme ama qaab dhismeed. Farshaxanleydu waxay awoodaan inay falanqeeyaan fikradaha ama fikradaha macaamiishooda oo ay u abuuraan mashaariicda dhismaha ee u gaarka ah iyaga ku saleysan.
Shaqada naqshadeeyuhu way kala duwanaan karaan: qaar ayaa ku takhasusay qaabeynta guryaha dhismayaasha ama ganacsiga, qaarna waxay diiradda saaraan muuqaalka dhirta, qorsheynta magaalada, gudaha iyo naqshadda cagaarka. Sido kale waxaa jiro laan architecture ah oo lashaqeeya xarumaha warshadaha.
Hoos waxaan ku eegi doonaa laba xirfadood - naqshadeeyaha gudaha iyo naqshadeeyaha muuqaalka dhulka. Mid kasta oo ka mid ahi wuxuu leeyahay astaamo u gaar ah oo u baahan xirfado iyo aqoon kala duwan.
Muuqaalka naqshadaha muuqaalka dhulka
Naqshadeeyayaasha muuqaalka dhulku waxay qurxin karaan meelaha bannaanka ka ah, laakiin waxay waqtigooda inta badan ku qaataan xafiisyada, abuurista iyo habeynta qorshayaasha, diyaarinta qiyaasta qiimaha iyo la kulanka macaamiisha. Si kastaba ha noqotee, tani micnaheedu maahan in naqshadeeyayaasha muuqaalka muuqaalka dhulka uusan waqti ku luminin goobahooda shaqo ama goobta mashruuceeda laga horumarinayo.
Inta badan naqshadaha muuqaalka dhulka waxay ka shaqeeyaan warshadaha dhismaha iyo injineerinka. Qaarkood waxay u shaqeeyaan shirkadaha adeega ee la macaamila qaab dhismeedka muuqaalka dhulka.
Xirfadaha iyo kartida naqshadeeyaha muuqaalka muuqaalka dhulka
Si lagu guuleysto, naqshadeeyaha muuqaalka dhul waa inuu lahaadaa xirfadaha soo socda ee jilicsan iyo tayada shaqsiyadeed:
hal-abuurnimo - waxay kuu oggolaaneysaa inaad naqshadeyso bannaano qurxoon oo bannaanka ah oo waliba shaqeyn doona
dhageysi firfircoon - tani waxay kuu oggolaaneysaa inaad fahamto baahiyaha iyo rabitaanka macaamiisha
isgaarsiinta afka - naqshadeeyuhu waa inuu awood u yeeshaa inuu u gudbiyo macluumaadka macaamiisheeda
fikirka xasaasiga ah - naqshadaha dhismaha waxay u baahan yihiin inay gaaraan go'aano ayna xaliyaan dhibaatooyinka, iyo xirfadaha fekerka adag ee xasaasiga ah ayaa tilmaamaya xalka suurtagalka ah ka dibna qiimeeya ka hor intaan la dooran tan ugu fiican
akhris-qoraalka kombiyuutarka - tikniyoolajiyadda ayaa door weyn ka ciyaartay shaqadan, oo ay ku jiraan barnaamijyada sida CADD ee loogu talagalay diyaarinta moodeelka iyo Nidaamka Macluumaadka Juqraafiyeed
Waajibaadka iyo mas'uuliyadaha naqshadeeye muuqaalka muuqaalka dhulka
Shaqadani caadi ahaan waxay ku lug leedahay la kulanka macaamiisha, injineerada iyo naqshadaha iyo kobcinta cilaaqaadyadan si ay u muujiyaan xalalka suurtagalka ah ee dhibaatooyinka iyo aqoonsashada baahiyaha.
Waxa kale oo muhiim ah in la tixgeliyo arrimaha deegaanka sida biyo-baxa iyo helitaanka tamarta marka la shaqeynayo. Baarkin lama abuuri karo iyada oo aan la diyaarin qorshooyinka goobta iyo muujinta jaantusyada qorshayaasha iyadoo la adeegsanayo naqshada kumbuyuutarka ee lagu caawiyo iyo soosaarida wax soo saarka (CADD). Naqshadeeyaha muuqaalka muuqaalka dhulka ayaa sidoo kale diyaariya qiyaasaha kharashka wuxuuna kormeeraa miisaaniyadda mashruuca. Maahan qasab shaqo miis.
Naqshadeynta dhismayaasha la dego
Naqshadayaasha gudaha ee guryaha waxay si dhow ula shaqeeyaan macaamiisha si ay u aqoonsadaan baahidooda iyo rabitaankooda qol gaar ah ama guriga oo dhan. Xaaladaha qaarkood, waxay bixiyaan khibrad naqshadeynta mashruuc dhisme cusub. Waxay sidoo kale gacan ka geystaan ​​abuuritaanka hal meel oo lagu noolaado gudaha ama dibedda dhismaha. Amarada badankood waxay ku lug leeyihiin la kulanka macaamiisha dhowr jeer, abuurista naqshad iyo bixinta ikhtiyaarrada alaabada, shaybaarka ranjiga, sagxadda dhulka iyo xulashada nalka.
Sida naqshada guryaha, naqshadda ganacsigu waxay raacdaa isla howsha laakiin heer ballaaran. Naqshadeeyayaasha gudaha ee ganacsigu waxay qiimeeyaan waxqabadka, joogtaynta, sumadda macaamiisha sumcadda iyo qodobbada jawiga ganacsiga. Mashaariicdu waa inay buuxiyaan miisaaniyad macaamiisha iyo shuruudaha waqtiga. Xaaladaha qaarkood, naqshadeeyayaasha ganacsiga waxay u baahan yihiin inay abuuraan qaabe u oggolaanaya shaqada inay sii socoto inta lagu gudajiro.
Boodhadhku waa sahal dukumiinti ah oo gudbinaya sheeko xirfad leh xagga muuqaalka, qoraalka, halabuurka iyo qaabka. Waxaa jira noocyo fara badan oo iyaga ka mid ah iyadoo ay jiraan dad ku celcelinaya xirfaddan. Fayl galka wuxuu noqon karaa gebi ahaanba dijital ah, gabi ahaanba analog, ama iskudarka labada. Waaxda shaqaalaha ee shirkaddaadu waxay u baahan kartaa oo keliya gudbinta dhijitaalka ah, oo lagu bixiyo websaydhka websaydhka.
Dekad wanaagsan ayaa ka kooban guud ahaan mashaariicda wanaagsan. Haddii ay inbadan oo ka mid ahi ku jiraan xisaabta nashqadeeyaha ama naqshadeeyaha, ayaa kafiican. Khibraddu door weyn ayey ku leedahay xirfaddan.
Arimaha wada shaqeynta
Waxay naqshadeeyaan guryaha, dhismayaasha iyo alaabada kale. Qaababkaan waxaa loo isticmaalaa dhismayaasha cusub, dib-u-cusboonaysiinta, dib-u-cusboonaysiinta iyo kordhinta xarumaha jira. Waxay sidoo kale door muhiim ah ka ciyaaraan dib-u-habeynta, cusboonaysiinta iyo hagaajinta dhismayaasha dumay ama burburay, oo ay ku jiraan dhismayaasha la ilaaliyo, guryaha guryaha iyo taallo. Architektarka wuxuu ku lug leeyahay geedi socodka dhismaha oo dhan, laga bilaabo naqshadaha bilowga ah, sawirada iyo moodooyinka soo jeedinta, ilaa isbeddelada ku saleysan shuruudaha macaamiisha. Naqshadeeyuhu wuxuu si firfircoon ula shaqeeyaa xirfadleyda kale ee dhismaha inta mashruucu socdo, iyadoo la siinayo talooyin muhiim ah illaa iyo faahfaahinta ugu wanaagsan, isla markaaba ilaa baaritaanka ugu dambeeya iyo oggolaanshaha.
Immisa ayuu helayaa naqshada naqshadeeye?
Mushaharku badanaa waxay kuxiran yihiin goobta shaqada iyo heerka khibrada. Dhismaha qaab-dhismeedyada cusub ee xirfadda leh waxay qaban karaan howlo qoto-dheer oo kala duwan, sida soo-saarista mashaariicda, booqashada goobaha mashruuca, iyo u-sheegidda naqshadeeyaha mas'uulka ka ah mashruuca.
Markaad tahay shirkadle iskiis u shaqeysteyaal waad ku kalsoonaan kartaa xoogaa xaddidan oo xorriyad ah marka loo eego saacadaha shaqada iyo xulashada mashruuca. Qaddarka shaqada xafiiska iyo nashqadeynta dhabta ahi waxay ku kordheysaa khibrad sii kordheysa iyo kalsooni.
Markay waayo-aragnimadu sii korodho oo masuuliyadu isbadalaan - sidaas oo kale mushaharku waa sidaas Sidaa daraadeed, way adagtahay in si isdaba-joog ah loo sheego inta uu naqshadeeye naqshadeeye yahay.
naqshadeeyenaqshadeeyaha dhismahanaqshadeeyaha Częstochowanaqshadeeyaha katowiceMuuqaalka naqshadaha muuqaalka dhulkanaqshadeeyaha Krakownaqshadeeyaha doonyahanaqshadeeye Lublinnaqshadeeye suuq cusubnaqshadeeye poznańnaqshadeeyaha Szczecinnaqshadeeyaha warsawnaqshadeeyaha gudahanaqshadeeyaha gudaha ee Krakownaqshadeeyaha gudaha ee doontanaqshadeeye gudaha ah poznańnaqshadeeyaha gudaha ee Szczecinnashqadeeyaha gudaha warsawnaqshadeeyaha gudaha imeclawnaqshadeeyaha Wrocławnaqshadeeyaha mushaharkaImmisa ayuu helayaa naqshadeeye gudaha ah inuu kasbadonaqshadeeyaha lagama maarmaanka ahnaqshadeeye naqshadeeyeshaqada naqshadahashaqada naqshadeeyaha muuqaalka dhulkafarsamada naqshadeeyahaxirfad dhisme